Hiafina Tsy Ho Fantatr’Olona Na tsia: Ahoana No Tokony Ho Fanapahankevitr’Ireo Mpitoraka Bilaogy ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2015 6:53 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Español, English
Kiba Shihuba, manohana ny tsy filazàna anarana amin'ny Aterineto. Sary nomen'ny EFF.org. maimaimpoana
Niaraha-nanoratra tamin'i Nani Jansen, izay talen'ny sampana lalàna an'ny Media Legal Defence Initiative (Fandraisana Andrakitra Miaro Ny Media Amin'ny Raharaham-pitsaràna) ity lahatsoratra ity.
Tokony tsy ho fantatry ny olona ve ianao amin'ny Aterineto? Raha tokony hanome hevitra ho anà mpitoraka bilaogy, mpanao gazety tsy miankina, na mpikatroka mafana fo amin'ny Aterineto amin'io resaka io ianao, inona ireo zavatra tianao ho jereny? Maro tamintsika no nandalo tamin'io zotra io, kanefa zavatra tsy dia resahantsika betsaka izany, satria matetika dia mitranga aminao any aminà toerana manokana io.
Nisy adihevitra maro momba ny vokatry ny politikan'ny governemanta sy ny orinasa momba io resaka io — eritrereto fotsiny ny politikan'ny tsy maintsy ametrahana ny anarana marina amin'ny Facebook sy Nymwars. Ary maro ireo loharanom-baovao afaka jerena momba ny fomba hiarovana ny tsy fahafantaran'ny olona anao amin'ny Aterineto. Betsaka tokoa ireo fampianarana fiarovana nomerika sy ireo torolàlana azo arahana, na dia hoe amin'ny fomba fiteny sasany ihany aza.
Fa matetika ny zotran'ny fandraisana fanapahan-kevitra mialoha io no tsy dia raharahiana loatra. Misy ireo resaka lalàna, teknika, politika, ary ny mikasika anao manokana tsy maintsy jerena, izay sarotra ny fiatrehana azy rehetra ireo. Ary tsy misy valiny “marina” raikitra ho an'ny tsirairay.
Nitolona tamin'io olana io izahay tamin'ny trangan'ireo mpitoraka bilaogy Zone9, ilay vondronà mpikatroka mafana fo amin'ny Aterineto nosamborina tany Etiopia ny Aprily 2014 ary nampangaina tamin'ny porofo napetrapetraka fotsiny daholo ho nanao fihantsiana fampihorohoroana. Na dia nanoratra matetika tamin'ireo anarany marina aza ireo mpitoraka bilaogy, nianatra momba ireo teknolojian'ny serasera voaaro, mba ho afaka hitazona ireo fizotry ny fikarohany sy ny tatitra ataony mba ho azy ireo manokana. Mifanohitra tamin'izany anefa, lasa anisan'ny raharahan'ny governemanta manohitra azy ireo izany — miseho ao amin'ny taratasin'ny fiampangàna azy ireo ny fampiasany ny “Security in-a-box” (fitaovana sy tetikady ho fiarovantena niomerika ) an'ny Tactical Technology Collective .
Ohatra iray hafa ihany koa ny trangan'ireo mpitoraka bilaogy any Kiobà, izay tena matanjaka tokoa ny fiambenana ny isam-batan'olona, ka fomba tsy azo eritreretina akory matetika izany hoe tsy fitononana anarana amin'ny Aterineto izany. Tao amin'ny tafatafa niaraka tamin'ny Global Voices ny taona 2009, nanazava izao i Miriam Celaya, Kiobàna mpitoraka bilaogy :
…aty, tena mety ahitan-doza kokoa ny mijanona “tsy ho fantatr'olona” mba hiezahana hiafenana. Ao amin'ity firenena tsy dia mazavazava ity, mora tratran'ny fandrahonana ianao. Fantatro fa fantatry polisy ny tena tarehiko ary afaka maminany izy fa matahotra aho…
Kiobàna iray hafa mpitoraka bilaogy ihany koa no nanamarika fa raha ny marina dia mety haharatsy kokoa ny toe-draharaha io. “Amin'ny fanoratana amin'ny solon'anarana,” hoy izy, “toa milaza amin'ny polisim-panjakana isika hoe mieritreritra ny hanao zavatra tsy mety [isika].”
Misy ireo tranga tsy voatanisa sy ohatra afaka trandrahantsika mba entina hanampiana ireo mpanoratra sy mpikatroka mafana fo ety amin'ny Aterineto handalo amin'io làlana io. Noho izany amin'iny herinandro ambony iny, hanao sehatra hiadian-kevitra mikasika io lohahevitra io ao amin'ny Re:Publica any Berlin ny Global Voices sy ny the Media Legal Defence Initiative. Ny hamelabelatra ireo zavatra tokony arahana ho an'ireo olona miatrika io olana sarotra io no fanirianay.
Mialoha ilay hetsika, nanapaka hevitra ny hiresadresaka tao amin'ny Aterineto aloha izahay, niresaka tamin'ireo ekipan'ny GV Advox ary ireo mpamaky anay. Haingana no nilazan'ireo ao amin'ny Advox fa mihoatra noho ny lafiny fiarovana ara-teknika ilay resaka. “[Tokony samy] mieritreritra ny fanivànan-tenany, ireo foto-kevitra, fiarovana manokana, ary ireo fetrany manokana… zavatra iray ny resaka fiarovana ara-teknika, ary iray hafa mihitsy ny fipetraky ny fisainanao sy ny fihetseham-ponao,” hoy ny mpanoratra iray.
“Misy resaka kanto amin'ny fanaovana bilaogy tsy mitonona anarana,” hoy ny mpanoratra iray izay nahavita nampiasa anarana samihafa tamin'ny aterineto hatrizay, nizara loharanom-baovao momba azy manokana, amin'ireo sehatra manokana nefa sady an'ny daholobe ihany koa toy ny Facebook, raha sady nitazona ny mombamomba azy manokana amin'ny maha mpitoraka bilaogy azy hisaraka amin'io mihitsy, ary kaonty maromaro ao amin'ireo media sosialy hafa koa. Ho an'ny maro, mety mahatonga fikorontanan'ny fihetseham-po ihany koa io, indrindra raha toa ka miova ny toe-javatra politika sy momba anao manokana.
Mpanoratra iray hafa no niresaka momba ny fitokanana amin'ny fanafenana anarana. “Mampitokana anao amin'ny maro ihany koa ny fanafenana anarana,” hoy izy. “Afaka manana tambajotra miaro anao ve ianao no sady manafina ny momba anao ihany koa? Mety ho tsaratsara kokoa aminao ve ny fahafantaran'ny olona anao?”
Manam-pahaizana iray momba ny fiarovana nomerika tao anatin'ny vondrona no nitondra ny tena maha samihafa ny “fanafenana ny mombamomba anao” sy ny “fanafenana ny toerana misy anao”. Nohazavainy tamin'ny fampiasàna ohatra avy any Bahrein ny amin'ny “fanafenana ny toerana misy anao” :
Fantatsika tsara fa manenjika matetika ireo tsy mitovy hevitra na mpanao gazety ireo manampahefana any Bahrein, amin'ny fisintonany azy ireo mba hanindry rohy, matetika alefa any amin'izy ireo amin'ny alalan'ireo media sosialy (ireo bitsika na hafatra amin'ny facebook ohatra)….mijery lahatsoratra milaza vaovao fotsiny aloha izy ireo no tokony ho izy (matetika avy amin'ny vohikala mitsangana ara-dalàna), [kanefa] ao ambadik'izay, [mahazo sy mandrakitra] ny adiresy IP an'ireo izay tratra amin'ny fandrika ilay rohy, ary avy eo izay vao mandefa azy any amin'ilay lahatsoratra milaza vaovao.
[Mampiasa] io fomba io ireo manampahefana mba hahazoana ny adiresy IP an'ireo [olona fandrihany]…ary avy amin'ny alalan'ny fanaraha-mason'izy ireo ny Aterineton'ny fanjakana sy ny mpamatsy ny tolotra finday, afaka manamarina ny tena mombamomba ilay mpampiasa aterineto marina izy ireo (raha toa ka mampiasa anarana diso na solon'anarana amin'ny aterineto ilay olona) ary ny toerana misy azy ihany koa. Afaka eritreretinao avy eo hoe ahoana ireo fanaovana bemidina sy fisamborana manaraka azy.
Amin'io toe-javatra io ohatra, afaka nanakanana ireo manampahefana tsy ho afaka nahazo ny adiresy IP niaingàna ohatra ny fampiasàna ny fitaovana toy ny Tor. Fantatsika tsara ny mety hahatonga antsika ho lasa mitokana amin'ny fampiasàna ny Tor ao amin'ny fanjakàna mpanao hery famoretana. Satria any Bahrein io izao, hitako ho safidy tena ratsy ny tsy fampiasàna ny Tor, kanefa mieritreritra aho fa ohatra lehibe io amin'ny olana ezahantsika ho vahaina.
Noho izany, ankehitriny, te-hanontany mitovy amin'ireo mpamaky anay izahay: Inona ireo fanontaniana manan-danja indrindra tianao ametrahan'ny olona fanontaniana amin'ny tenany mialoha ny andraisana io fanapahan-kevitra io? Inona ireo tantara mety hanampy antska hamelabelatra ity resadresaka ity? Inona ireo ohatra hitantsika, izay fanta-bahoaka, izay afaka hanampy ireo mpitoraka bilaogy ary ireo mpikatroka mafana fo ao amin'ny Aterineto handalo amin'io zotrà-na fandraisana fanapahan-kevitra sarotra io? Lazao aminay eto ireo eritreritrareo, ao amin'ny Twitter (tweet @Advox) na mandefasa hafatra amin'ny alalan'ny pejy fifandraisana aminay.
Nampiaina ny fifanakalozan-dresaka momba io lohahevitra io i Nani Jansen sy i Ellery Roberts Biddle tao amin'ny Re:Publica ao Berlin, ny 5 May 2015, nanomboka amin'ny 4-5 ora hariva . Jereo ny tatitra mikasika io taorian'ny resadresaka!